Induction Preheating Welding Parts of Automotive With RF Heating System
Ikhaya / izicelo / Ukunyusa ukunyusa / Induction Ukutshisa iiWelding zeNxalenye zeZithuthi
Ukuchithwa kweNdleko yokuThengisa izithuthi zeeMoto
Udidi: Ukunyusa ukunyusa tags: ukuqhelisela ukufakwa kwezithuthi ngaphambili, amalungu e-induction preheating, ukutyalwa kokunyusa ukunyusa, preheating welding welding, ukunyusa ulwelo, Inkqubo yentsimbi yokuthambisa
Induction Ukutshisa iiWelding ngeeNxalenye zeZithuthi ngezixhobo zokuFudumeza ngokuFudumeza
Injongo Ukutshisa ubushushu bangaphambi kwe-300 ° F kwisithuba semizuzwana eyi-15 yesicelo se-welding kunye nokugcina ubushushu kwindawo ye-welding kwimizuzwana eyi-15 emva kokuba amandla
Ikhonkco yensimbi yensimbi yensimbi; I-350 ° kunye ne-400 ° F ebonisa ukupenda; 350 °, 375 ° kunye no-400 ° F obushushu obonisa "iikhrayoni"
Ukushisa 350 ° F
Izixhobo ze-DW-HF-35kW zonikezelo lwamandla, isikhululo sobushushu esikude esinee-capacitors ezimbini ze-1.2 μF kunye nekhoyili ye-pancake eyenzelwe ngokukodwa.
Inkqubo yalungiswa yakha ukujikeleza i-asi 400 ° kwimizuzwana eyi-15 kwaye i-coil yoqheliso yabekwa ngaphezulu kwe-asi. Umjikelo we-asi (ngaphantsi kwekhoyili) wawuzotyiwe nge-350 ° nakuma-400 ° F obushushu obubonisa ipeyinti. Ngelixa i-asi yayijikeleziswa, amandla e-RF asetyenziswa kwimizuzwana eyi-15. Zonke
Ipeyinti inyibilikile, iqinisekisa ukuba iqondo lobushushu le-asi yayingaphezulu kwe-400 ° F. Amandla e-RF avaliwe kwaye amaqondo obushushu "iikhrayoni" abekwa kwangoko ecaleni kwe-asi ukuze abeke esweni ubushushu. Ikhrayoni engama-400 ° F ayinyibiliki; ikhrayoni engama-375 ° F inyibilika kangangemizuzwana eli-15; ikhrayoni engama-350 ° F inyibilike i-30
Iziphumo I-asi yesinyithi yafudunyezwa ngaphezulu kwe-400 ° F kwimizuzwana eyi-15 kwaye amaqondo obushushu angaphezulu kwama-350 ° F agcinwa imizuzwana engama-30 emva kokuba kucinyiwe umbane, ukuhlangabezana neemfuno zesicelo se-welding.
Ukukhupha i-Bar Bar yokuThambisa